Nomery 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ashaninka Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Motu Myama Navajo Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanana any Singapour Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
5 Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 2 “Omeo baiko ny zanak’Israely mba havoakany eny ivelan’ny toby ny olona rehetra boka,+ na misy tsiranoka mivoaka amin’ny taovam-pananahany,+ na maloto satria nikasika faty.*+ 3 Avoahy ireny, na lahy na vavy. Avoahy eny ivelan’ny toby ireny+ mba tsy handotoany+ ny toby, satria mitoetra+ eo anivon’ny vahoaka ao amin’ireo toby aho.” 4 Dia nanao izany ny zanak’Israely, ka navoakany teny ivelan’ny toby ireny. Araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy no nataon’izy ireo. 5 Ary hoy ihany i Jehovah tamin’i Mosesy: 6 “Lazao amin’ny zanak’Israely hoe: ‘Raha misy lehilahy na vehivavy manao ny iray amin’ireo fahotana mpahazo ny olombelona, ka mivadika amin’i Jehovah, dia ho meloka tokoa izy.*+ 7 Ary tsy maintsy miaiky+ ny fahotany izy, ka hanonitra manontolo an’ilay zavatra nahameloka azy, sady mbola hanampy ampahadiminy.+ Dia homeny an’ilay nanaovany fahadisoana izany. 8 Raha toa anefa ilay nanaovany fahadisoana ka tsy manana havana akaiky azo omena an’ilay onitra noho ny heloka vitany, dia ho lasan’ny mpisorona ilay onitra omena an’i Jehovah, ankoatra ny ondrilahy fandrakofam-pahotana, izay handrakofan’ny mpisorona ny fahotan’ilay meloka.+ 9 “‘Ho an’ny mpisorona ny fanomezana rehetra+ avy amin’ny zava-masina rehetra+ hatolotry ny zanak’Israely an’io mpisorona io.+ 10 Ho azy foana ny zava-masina hatolotry ny tsirairay. Izay homen’ny tsirairay ho an’ny mpisorona, dia ho azy.’” 11 Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 12 “Mitenena amin’ny zanak’Israely hoe: ‘Mety hisy vehivavy vadin’olona miala amin’ny lala-mahitsy ka mivadika amin’ny vadiny,+ 13 satria nisy lehilahy hafa nanao firaisana taminy ka nisy tsirinaina nandeha,+ nefa tsy hitan’ny mason’ny vadiny+ izany nataony izany sady tsy nisy nahafantatra mihitsy. Efa nandoto ny tenany ravehivavy, nefa tsy misy vavolombelona hiampanga azy ary tsy tratra izy. 14 Raha lasa saro-piaro+ ralehilahy ka niahiahy ny vadiny ho nivadika taminy, ary efa nandoto ny tenany tokoa ravehivavy, na koa lasa saro-piaro ralehilahy ka niahiahy ny vadiny ho nivadika taminy, nefa tsy nandoto ny tenany ravehivavy, 15 dia hoentin-dralehilahy any amin’ny mpisorona ilay vadiny,+ ary hoentiny miaraka aminy koa ny fanatitra aterin-dravehivavy, dia lafarinina ampahafolon’ny efaha* vita tamin’ny vary orza. Tsy horarahany menaka eo ambonin’io sady tsy hasiany ditin-kazo manitra,+ satria fanatitra varimbazaha atolotra noho ny fahasarotam-piaro izany, dia fanatitra fahatsiarovana izay mampahatsiahy fahadisoana. 16 “‘Ary hampanatonin’ny mpisorona ravehivavy ka hasainy mijoro eo anatrehan’i Jehovah.+ 17 Dia haka rano madio* amin’ny zinga tanimanga ilay mpisorona, ary haka vovoka eo amin’ny tany itoeran’ny tranolay izy, ka hanao izany ao anatin’ilay rano. 18 Ary hasain’ny mpisorona mijoro eo anatrehan’i Jehovah ravehivavy, ka hovahany ny volon-dohan-dravehivavy. Koa hataony eo am-pelatanan-dravehivavy ny fanatitra fahatsiarovana, dia ilay fanatitra varimbazaha atolotra noho ny fahasarotam-piaro.+ Ho eny an-tanan’ny mpisorona kosa ny rano mangidy mitondra ozona.+ 19 “‘Ary hampianiana an-dravehivavy ny mpisorona ka hilaza aminy hoe: “Raha tsy nisy lehilahy nanao firaisana taminao, ary tsy niala tamin’ny lala-mahitsy ianao ka tsy nandoto ny tenanao raha mbola eo ambany fahefan’ny vadinao,+ dia aoka tsy hisy vokany aminao ity rano mangidy mitondra ozona ity. 20 Fa raha niala tamin’ny lala-mahitsy kosa ianao nefa mbola eo ambany fahefan’ny vadinao,+ ary efa nandoto ny tenanao satria nisy lehilahy nanao firaisana taminao+ ankoatra ny vadinao...” 21 Ary hasain’ny mpisorona mianiana sy miozona+ ravehivavy. Dia hilaza amin-dravehivavy ny mpisorona hoe: “Hataon’i Jehovah ho fanozonana sy ho fianianana eo anivon’ny firenenao anie ianao, ka havelan’i Jehovah hikainkona ny fenao,*+ ary hibontsina ny kibonao! 22 Ary hiditra ao amin’ny tsinainao ity rano mitondra ozona ity, ka hampibontsina ny kibonao sy hampikainkona ny fenao.” Dia hiteny ravehivavy hoe: “Amena!* Amena!” 23 “‘Ary hosoratan’ny mpisorona amin’ny boky ireo ozona ireo+ ka hofafany+ ao anatin’ilay rano mangidy. 24 Dia hampisotroiny an-dravehivavy ilay rano mangidy mitondra ozona,+ ka hiditra ao anatiny ho zava-mangidy izany. 25 Ary halain’ny mpisorona eny an-tanan-dravehivavy ilay fanatitra varimbazaha+ atolotra noho ny fahasarotam-piaro, ka hahetsiketsiny* eo anatrehan’i Jehovah, dia hoentiny ho eo akaikin’ny alitara. 26 Hakan’ny mpisorona ilay fanatitra varimbazaha ho fampahatsiahivana,+ ka hodorany eo ambony alitara mba hidona-tsetroka. Ary hampisotroiny an-dravehivavy ilay rano avy eo. 27 Rehefa avy nampisotroiny an-dravehivavy ilay rano, ary raha nandoto ny tenany izy ka nivadika tamin’ny vadiny,+ dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ilay rano mitondra ozona, ka hibontsina ny kibony sady hikainkona ny feny, ary ho lasa fanozonana eo anivon’ny fireneny izy.+ 28 Raha tsy nandoto ny tenany kosa anefa ravehivavy fa madio, dia tsy hiharan’izany sazy izany izy.+ Ary hataon’ny vadiny izay hahabevohoka azy. 29 “‘Izany no lalàna momba ny fahasarotam-piaro,+ raha misy vehivavy miala amin’ny lala-mahitsy+ nefa mbola eo ambany fahefan’ny vadiny+ ka tena nandoto ny tenany, 30 na koa misy lehilahy lasa saro-piaro, ka miahiahy ny vadiny ho nivadika taminy. Dia hasainy mijoro eo anatrehan’i Jehovah ravehivavy, ka hampiharin’ny mpisorona aminy izany lalàna rehetra izany. 31 Ary tsy hanan-tsiny ralehilahy, fa ny vadiny kosa hampamoahina noho ny fahadisoany.’”
^ A.b.t.: “rano masina.”
^ Mety hanondro ny fivaviana io teny io.
^ Midika hoe “Ho tanteraka anie izany!”
^ Izany hoe mandroso sy mihemotra mankany amin’ny alitara.